Uyenza njani iWindows Vista iphasiwedi yokuseta kwakhona iDiski
Indlela efanelekileyo yokuzikhusela kunye nephasiwedi kukudala iphasiwedi kwakhona kwi-Windows Vista. I-disk yokusetha kwakhona iphasiwedi yindlela yokuzikhusela. Iyakugada kwizilingi kunye neentolo zabanye abasebenzisa iPC yakho.
IWindows Vista iza nenkqubo yezokhuseleko entle kakhulu, emnandi xa ufuna ukugcina abantu ngaphandle kwekhompyuter yakho kodwa ingekho kangako ukuba awukhumbuli elakho igama lokugqitha kwaye igcina wena ngaphandle ngokunjalo.
Kutheni le nto kubaluleke kangaka ukwenza idiski yokusetha kwakhona iphasiwedi kwiakhawunti yakho? Kuba nawuphi na umlawuli onokufumana kwi-PC yakho unokutshintsha iphasiwedi-kwaye akukho nto unokuyenza ngayo!
Khetha Qala → Iphaneli yokuLawula, cofa iiAkhawunti zomsebenzisi kunye ne icon yoKhuseleko loSapho, emva koko ucofe i icon yomsebenzisi yeeAkhawunti.
Ipilisi yokuchonga ipilisi 433
Ngokukhawuleza okanye kamva, uya kugqiba kwiNguquko kwiAkhawunti yakho yomsebenzisi ibhokisi yencoko.
Kwipaneli yemisebenzi ngasekhohlo, cofa indawo ethi Yenza iQonga lokusetha kwakhona iDiski kwikhonkco.
IVista inyusa iWizard yePhasiwedi ekhohliweyo, ekunyathela ngokwenza idiski yokusetha kwakhona iphasiwedi.
Sukuba nexhala. Igama lincinci lokudibanisa. Le wizard ofuna ukuyiqhuba xa ukhumbula ipassword yakho ukuze uphinde ufumane yonke idatha yakho ukuba uyalibala iphasiwedi.
Faka isitshixo sakho se-USB kwaye ucofe ulandelayo.
Iwizard ibuza ukuba ufuna ukwenza phi isitshixo sediski.
Kudala-dala, yonke ikhompyuter ine-floppy drive, kwaye iMicrosoft yathatha ukuba igama lokusetha kwakhona idiski yakho iya kuba yidiski yediski. Amaxesha ayatshintsha. Kule mihla ukhetho lwakho lokwenyani kukuqhuba isitshixo se-USB okanye ikhamera. Ewe, ikhamera-okanye phantse naluphi na uhlobo lokuqhuba oluxhumeke kwizibuko le-USB, kubandakanya umfundi weSmartCard.
Khetha i-drive ofuna ukuyibamba kwifayile yokusetha kwakhona iphasiwedi kwaye emva koko ucofe ulandelayo.
Iwizard icela igama eligqithisiweyo lwangoku, ekufuneka ulinikeze ukwenza idiski.
I-Vista ayenzi ngokwenyani idiski yegama eligqithisiweyo kodwa endaweni yokubeka ifayile encinci ebizwaUsetyenziso.pswKwi drive.
Chwetheza igama eligqithisiweyo leakhawunti kwaye ucofe ulandelayo.
Ubona inkqubela phambili eluhlaza ebha kwiipesenti ezi-100 ezigqityiweyo.
Cofa Okulandelayo. Emva koko nqakraza Gqiba.
Iwizard ikuxwayisa ukuba le yeyokugqibela, eyona ilungileyo, kunye ne-disk yokusetha kwakhona igama eligqithisiweyo kule akhawunti. Ngoku ungasebenzisa i-password yakho yokuseta kwakhona idiski.
Gcina idiski- ngakumbi ifayileUsetyenziso.psw- kwindawo ekhuselekileyo. Nabani na ofumana le fayile angangena kwi-PC yakho ngaphandle kokwazi igama eligqithisiweyo.
Nangona iMicrosoft ithanda ukuyenza ivakale ngokungathi kukho into enomlingo malunga nokuseta kwakhona idiski yegama eligqithisiweyo, enyanisweni akukho nto. Inkqubo ye-Usetyenziso.pswIfayile ibambe ulwazi oluvula iakhawunti. UngakopaUsetyenziso.pswnakweyiphi na idiski konke konke kwaye uyisebenzise xa ungena kule PC ikhethekileyo ngale akhawunti.
Ukwenza iikholamu ezimbini ngegama
iziphumo ebezingalindelekanga zengcambu zedandelion
Itshathi yethayileyol yentsana
Yintoni i-methocarbamol 750 mg
amox k clav ithebhu 875mg